CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Tsipika mitaingina fantsom-pifandraisana vaovao ho an'ny rafitry ny rivotra - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Eto ianao : Home / Vaovao
CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Tsipika mitaingina fantsom-pifandraisana vaovao ho an'ny rafitry ny rivotra
Fotoana: 2018-04-21 Hits:
Ny rafi-pitobiana dia andiana rafitra fikirakirana rivotra tsy miankina misy ny rafitra famatsian-drivotra sy ny rafitra fanalefahana. Ny rafitra fantsom-panafody karazana fantsom-pifandraisana dia misy mpankafy sy fantsona fantsom-pivoarana, izay mety handany ny rivotra anaty anaty amin'ny alàlan'ny fanafarana ny rivotra madio izay nodiovin'ny mpankafy ny rivotra ao anaty trano. Ny fantson-drivotra no fantsom-pitaterana tena ilaina amin'ny fantsona. Ny rafitry ny rivotra dia afaka mamorona tontolo iainana mahasalama sy azo iainana ho an'ireo mpampiasa faran'ny mpanjifa.
Ny sosona anatiny sy ny sosona ivelany an'ny fantsom-pifamoivoizana dia mifangaro amin'ny fitaovana PE misy fananana samihafa. Ny famolavolana rafitra mihombo avo roa heny dia mahatonga ny fantsona tsy azo apetraka amin'ny valindrihana sy valindrihana mihantona, fa io koa no safidy mety hapetraka amin'ny beton noho ny fahombiazan'ny fanoherana mahery vaika. Ny famolavolana manokana ny firafitra miolikolika avo roa heny dia misy firakotra fanoherana ny static sy ny bakteria, ary ny rindrina anatiny dia malama, mora diovina, ambany ny fikororohana, azo fehezina ary miaro ny hafanana.
Ny tsy fitovizan'ny fantsom-panafody boribory mihombo sy ny fantsom-pifamoivoizana mahazatra.
1. Ny haben'ny rindrina anatiny sy ivelany dia samy hafa ；
2. Ny fitaovana amin'ny rindrina anatiny dia manokana, manify ny hateviny ；
3. Fepetra avo lenta.
Shanghai Jwell Pipe Equipment Co. Ny palitao manokana an'ny rano dia azo ovaina kokoa amin'ny serivisy fantsona mitaona rivotra. Ny masinina mamorona dia mandray ny chiller vaovao mitsangana vaovao, fa ny fametrahana ny bobongolo ho lasa marina kokoa, ary mora ny manova, izay mety ho mora kokoa amin'ny mpanjifa no mitantana.
HIVERINACHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Tsipika fantsom-pandrefesana fantsom-panafody PE matevina.
NEXTCHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- LVT Soft Composite Floor Extrusion Line